नेयमार बार्सिलोना फर्किने सम्भावना कति ? - Nepali News Nepal
नेयमार बार्सिलोना फर्किने सम्भावना कति ?
मार्च 17, 2020 मार्च 17, 2020 Bishwaghatana0Comments नेयमार, नेयमार बार्सिलोना फर्किने सम्भावना कति ?, पिएसजी, पेरिस सेन्ट जर्मेन, बार्सिलोना
४ चित्र २०७६ एजेन्सी: पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)ले आफ्ना ब्राजीलियन स्टार फवार्ड नेयमार बेच्न तयार भएको छ ।पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) क्लबले नेयमारको लागि यो चोटी नँया मुल्य तोकेको छ ।
यो भन्दा अगाडी नेयमारको मुल्य १८६ मिलियन तोकिएको थियो। तर यो पटक भने नेयमार मुल्यमा ५१ मिलियन पाउन्ड घटाउदै १३५ मिलियन पाउन्डको नँया मुल्य तोकेको छ । संञ्चार मध्यम अनुसार यो सिजन अन्त्यसँगै नेयमारलाई बार्सिलोनाले अनुन्ध गर्ने गर्ने छ ।
अघिल्लो ट्रान्सफरमा नेयमारका लागि बार्सिलोनाले प्रयास गरेपनि अन्तिम समयमा मुल्यमा छिनोफानो नहुदा नेयमार पीएसजीमै रहन बाध्य बनेको थियो । तर यो चोटी भने नेयमार बार्सिलोना जाने सम्भावना बढेको छ । कप्तान मेस्सीले पनि नेयमारलाइ बार्सिलोना भित्राउन दबाव दिदै आइरहेका छन् ।
सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट नेयमार २२२ मिलियन पाउण्डमा पीएसजी गएका थिए । २८ वर्षीय नेयमारले पीएसजीमा तीन सिजन ८० खेल खेल्दै ६९ गोल गर्नुका साथै ३९ असिस्ट दिएका छन् । युइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुगेको पिएसजी लिग वानको शिर्ष स्थानमा छ ।
← प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानीका लागि मतदान आज
एसईई परीक्षा बिहिवारबाट,परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई नछुन निर्देशन →
बायर्न म्युनिक बुन्डेस लिगाको शीर्षस्थानमा
ए डिभिजन लिग:जावलाखेल युथ क्लबसँग ब्रिगेड बोइज पराजित
फ्रेवुअरी 3, 2020 फ्रेवुअरी 3, 2020 Bishwaghatana 0
ए डिभिजन लिग: एपीएफ बिरुद्ध संकटाको सहज जित